Kennels nohosorana, azonao antsoina ihany koa izy io toy ny kennels tariby, ny kennels alika tariby, kitapo alika tariby tariby.
Ny kennel tariby ary ny rafitra fitehirizana tariby dia nitombo laza noho ny fisehoany maoderina, ny safidy loko, ny famaranana palitao, ny fametrahana azy ary ny famolavolana lafo vidy. Ny famolavolana modular dia mamela ny fametrahana haingana sy mora amin'ny fanamafisana isan-karazany. Miorena haingana ho an'ny alika iray, na mampiasa takelaka maro hananganana hazan-tranon'alika maro.
Paingotra vy sy fefy, azo ampiasaina hanohanana karazan-tariby na harato tariby isan-karazany izy ireo. Fefy ho an'ny zaridaina sy trano ho an'ny filaminana sy fiarovana. Fanohanana amin'ny trano fambolena sy legioma. Spec. 1.75kgs / m 1.80kgs / m 1.85kgs / m 2.00kgs / m Halavany 1.5m-3.0m 1.5m-3.0m 1.5m-3.0m 1.5m-3.0m
Fiarovana fiarovana, izay fantatra koa amin'ny fefy oram-panala, fefy fiarovana plastika, fiarovana azo antoka.
Ny fefy fiarovana plastika dia tena hita maso ary mety amin'ny fananganana, faritra ski, fanaraha-maso ny vahoaka, asa eny an-dalana, ary na dia ny morontsiraka aza. Ity Snow Fefy ity dia afaka mampisaraka ireo faritra manomboka amin'ny Roadwork, na mamorona làlana, ary na dia ny Parking Lots aza.
Ny fefy fiarovana dia vita avy amin'ny Heavy Duty Polyethylene, (HDPE) ka mahazaka rivotra mahery, lanezy lanezy, ary fasika mihitsy aza. Matetika, ny fefy fiarovana dia loko volomboasary, loko manga ary loko maitso, satria ny loko mamirapiratra dia ho mora hita amin'ny be sy ny maro. Mora azo ovaina ny mihetsika sy tehirizina, ary miverina mampiasa amin'ny configurations samihafa.
Mora apetraka voaloko mba hiarovana amin'ny harafesin'ny loko maitso tsy manelingelina ho an'ny tokontany sy zaridaina